इच्छा अनुसार छोरा या छोरी कसरी जन्माउने ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
इच्छा अनुसार छोरा या छोरी कसरी जन्माउने ?
प्रकाशित मिति २ बैशाख २०७६, सोमबार २१:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । समाजमा छोरा या छोरी नजन्मिएकै कारण कैयौ परिवारमा द्वन्द्व हुने गर्दछन् । यसकै कारण कयै महिलाले मानसिक र शारिरीक यातना भोगिरहेका घट्नाहरु छन् । कतिपय महिलाले यसैको कारण सौता त कतिपयले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपरेका घटनाहरु भेटिन्छन् ।
कोही भने सन्तान प्राप्तीका लागि भएभरका अस्पताल, बैद्य, मठ–मन्दिर र तीर्थस्थलमा पुगेर सास्ती बेहोरिरहनु भएको त छैन ? यदि त्यसो हो भने छोड्नु होस्, ती सबैखाले प्रयास । चिनियाँ बैज्ञानिकहरुले लामो समय र अनुसंधानपछि पत्ता लगाईएको यो प्रविधि ९९.९ प्रतिशत सफल भएको छ । तपाई पनि ढुक्कका साथ यो प्रविधि अपनाउनु होस् । इच्छा र चाहाना तपाईको छोरा या छोरी पाउने जिम्मा श्रीमतिको । शुरुमा, चाइनीज विशेषज्ञद्धारा आविष्कार गरिएको यो प्रविधिमा धेरैले शंका गरेका थिए । तपाईंलाई पनि त्यस्तै लाग्न सक्छ ।
चाइनीज बैज्ञानिकको यो आविष्कार सन्दर्भमा दुविधा भएमा यो क्यालेण्डरलाई यसअघि जन्मिएको तपाईको छोरा–छोरीसँग समिक्षा गर्नसक्नु हुनेछ । त्यसका लागि तपाईको श्रीमती गर्भ रहँदाको उमेर र महिना एकिन हुनु पर्दछ । तपाईको छोरा या छोरी गर्भ रहँदाको अवस्थामा श्रीमतिको उमेर कति थियो ? कुन महिनामा श्रीमतिले गभर्धरण गरके ो हो ? अनि यो चार्ट हने ार्से ठय् ाक्कै मिल्ने छ । छोरा नै छोरा र छोरी नै छोरीले भरिएका कैयौं परिवारले यो प्रविधि अपनाएर यतिखेर हाँसीखुशीका साथ जीबन बिताइरहेका छन् । तपाई पनि यो प्रविधि अपनाउनोस्, सुखी र खुशीका साथ जिउनोस् ।
उद्योग क्षेत्रमा २० खर्ब ३३ अर्ब लगानी, विदेशीको दुई खर्ब ६८ अर्ब
काठमाडौं । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा २० खर्ब ३३ अर्ब लगानी भएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
दर्ता भएका कुल…
नर्भिक अस्पतालको लापर्वाहीः देव्रे खुट्टाको अपरेसन गर्नुपर्ने विरामीको दाहिने खुट्टा चिरियो
काठमाडौं । राजधानीको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालको चरम लापर्वाही बाहिर आएको छ । खुट्टामा समस्या भएपछि देव्रे खुट्टाको अपरेसन गर्न…
काठमाडौं । लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रम महोत्सव र डान्सबारमा नाच्दै आएका राजकुमार तामाङ र प्रिया लामा श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।…